The psychometer: Ihe niile ịchọrọ ịma gbasara ngwaọrụ a | Netwọk Mgbasa Ozi
Taa, anyị bịara kọwaa ọrụ nke ngwaọrụ ngwaọrụ ndị ọzọ na ihu igwe. Anyị ga-ekwu maka ya psychrometer. Ọ bụ ihe eji arụ ọrụ iji tụọ ọdịnaya nke alụlụ mmiri na kọlụm nke ikuku. Knowingmara alụlụ mmiri dị na mbara igwe dị mkpa iji chọpụta ogo iru mmiri.
Ọ bụrụ n’ịchọrọ ịmụ otu esi ejikwa psychrometer, njirimara ya niile na nlekọta ọ chọrọ, nke a bụ ọkwa gị.
1 Gịnị bụ psychrometer
2 Otu esi eji psychrometer
3 Okpomọkụ na iru mmiri
4 Agwa ndị a ga - emerịrị iji gụọ ọgụgụ nke ọma
5 Mmezi achọrọ
Gịnị bụ psychrometer
Dị ka anyị kwuru na mmalite, ọ bụ ngwaọrụ maka ịlele alụlụ mmiri na ikuku. Iji mee nke a, ọ mejupụtara a ụzọ ndị na-ekpo ọkụ iko na kọlụm mercury (Dị ka ochie thermometers). A na-etinyere ha n’elu efere. A na-akpọ otu n’ime ha bọlbụ akọrọ ma kpọọ nke ọzọ mgbochi mmiri. A na-akpọ ya n'ihi na o nwere mkpuchi ma ọ bụ mkpuchi nke ejiri akwa owu a na-akpọ muslin, nke kwesịrị ka mmiri dị mmiri iji nweta ihe ngosi achọrọ, tinye ya na bọlbụ mercury.
A na-ekpuchi bọlbụ mmiri ahụ dị na muslin dị ọcha ma jupụta na mmiri tupu ọhụụ. Mgbe bọlbụ ahụ na-agba ume, ọ ga-egosi ọnọdụ okpomọkụ nke bọlbụ mgbochi mmiri na nke ọzọ nke bọlbụ akọrọ.
Otu esi eji psychrometer
Iji nweta ọnọdụ okpomọkụ nke abụọ bulbs tụrụ, a ga-arụ usoro ndị a.
Anyị kwesịrị ịgụ akọrọ bọlbụ temometa na-eru nso iri ogo. Ọnọdụ okpomọkụ a na-akara akara okpomoku nke gburugburu.
Anyị na-etinye muslin nke mmiri tembom mgbochi mmiri ruo ogologo oge ma ọ bụ ugboro ole ọ bụla achọrọ ya na mmiri dị ọcha ruo mgbe ndapụ malitere na ala ya.
Iji mee ka muslin ahụ mee ka anyị ghara inwe psychrometer nke edozila n'ime mkpuchi ihu igwe. Ekwesiri iburu ya na mmiri ya na psychrometer ka isi ya na muslin ahu banye n'ime mmiri mmiri.
Ke ofụri ofụri, mmiri ga-nọ na-a iko akpa enịm n'ime ihu igwe ndo. Anyị ga-akọwa uwe ahụ ka emechaa mara ya nke ọma. Ọ dị mkpa ịnwa idebe akpa ahụ ka mmiri wee dị ọcha ma iru mmiri dị n'ime ndobe ihu igwe anaghị agbanwe agbanwe.
E nwere oge mgbe iru mmiri na-adị elu. Na ọnọdụ a muslin nwere ike ịpụta mmiri, mana ọ ga-adị mkpa mmiri ọzọ. Ọ bụrụ na ọnọdụ okpomọkụ dị elu ma ọ bụ iru mmiri ahụ dị oke ala, Ikwesiri igho muslin ogologo oge iji kpoo ya. Onye na - ekiri ihe na - ekiri ya nwere ike ime atụmatụ na ogo bọlbụ ga - abụ ogo 0 ma ọ bụ obere na oyi oyi.
Okpomọkụ na iru mmiri
Ọ bụrụ na ndị muslin dries tupu temometa egosi ziri ezi mgbochi mmiri bọlbụ okpomọkụ, anyị na-eme ihe na-ezighi ezi.
Enwere otutu ugwu na okpomọkụ gburugburu ụwa. Ya mere, enwere mpaghara ebe okpomọkụ dị elu na iru mmiri dị ala. Ndị a bụ mbara ọzara ma ọ bụ ọkara ọzara. N'oge ndị a, anyị ga-eji mmiri dị mma na mmiri nke muslin ma zere ihicha ya.
Iji mee ka mmiri dị jụụ, enwere ike idobe ya na akpa ihe na-awụ akpata oyi n'ahụ, mana ịnwa ịhapụ akpa ahụ n'èzí mkpuchi ahụ iji zere ịgbanwe iru mmiri dị n'ime ya.
Nzọụkwụ ọzọ ị ga - eme iji nweta psychrometer bụ ka ị gbaa ọsọ iji nye ikuku ikuku. Ikuku a ga-agabiga na bọlbụ nke temometa maka nha ziri ezi. Ọ bụrụ na a na-eme nha n'abalị, a ga-eji ihe ngosi. Ọ bụrụ na psychrometer anyị na-eji bụ èbè, anyị ga-agbanye ya na ọsọ nke mgbanwe anọ kwa nkeji. A na-agba ọsọ ntụgharị a iji were ọgụgụ ngwa ngwa. Nke a bụ mgbe ị kwesịrị iji nwayọ kwụ ọtọ ma were ọgụgụ ahụ na ndò.
Anyị ga-ekuku oke ikuku maka nkeji atọ. Mercury na temometa kwesịrị ịkwụsị ọdịda ya wee ruo ogo ya kacha nta. A ga-agụrịrị ọgụgụ site na ịbelata ụkpụrụ ruo ụzọ iri. Uru anyị ga - enweta bụ nke mmiri ọkụ bọlbụ.
Anyị ga-agbanyụ onye ofufe ahụ ma ọ bụrụ na anyị na-ahụ ihe abalị, anyị ga-agbanyụ anya.
Ọ bụrụ na ikuku ikuku dị ala ma ọ bụ hara nha 3, ọ dị mkpa ka moisten na muslin na mmiri dị elu okpomọkụ. Nke a ga - agbaze kpamkpam ice ọ bụla na - ewuli elu na bọlbụ temometa ma ọ bụ na muslin n'onwe ya.
Agwa ndị a ga - emerịrị iji gụọ ọgụgụ nke ọma
Ọ bụrụ na anyị chọrọ iwere data dịka ntụkwasị obi dị ka o kwere mee, anyị kwesiri iburu n'uche akụkụ ụfọdụ:
Mgbe anyị gụrụ temometa ahụ, anyị ga-eguzo n’ebe dị mma nke ihe dịka 30 cm ma ọ bụ karịa iji zere na ikpo ọkụ nke ahụ anyị na-emetụta ọnọdụ okpomọkụ nke temometa ahụ. N'ụzọ dị otú a, anyị ga-enweta ọgụgụ ziri ezi
N'oge ahụ, gbaa mbọ hụ n'ahịrị a na-ahụ anya ga-ejupụta na meniscus nke mmiri mmiri ahụ, ọ dịkwa n'akụkụ temometa. N'ụzọ dị otú a, anyị ga-ezere njehie ndị ọzọ.
Ọ bụrụ na a na-agụ akwụkwọ temometa n'abalị, anyị ga-edebe oriọna eletrik maka obere oge ma ghara iweta ya na ngwaọrụ ahụ. Ma ọ ga-emetụta na-ewere nke okpomọkụ.
Ọ bụrụ na ejiri sling psychrometer, ọ dị obere ịme ya n'èzí na ndo dị n'akụkụ saịtị nyocha ahụ.
Shelterlọ elu ihu igwe bụ ngwa ọrụ nke ngosi ya bụ ngosipụta kachasị mma nke nlekọta nke onye na-ekiri ya nwere ọdụ Ọdụ ya. Ha abụọ chọrọ nlekọta ụfọdụ iji chebe ha. Ndị a bụ nlekọta:
Kootu nhicha dịkarịa ala otu ugboro n'ụbọchị wepụ unyi na ájá nke nwere ike idozi.
Agba ahụ kwesịrị ịdị mma. O zuru ezu iji tee ya kwa ọnwa isii. Ọ bụrụ na ọdụ dị nso n'ụsọ osimiri ọ ka mma ịcha ya kwa ọnwa atọ.
Mgbe ha kwusịrị ikpeazụ nke ụbọchị ahụ, gbanwee mmiri eji agba muslin ahụ mgbochi mmiri bọlbụ temometa. Anyị ga-asachakwa igbe dị na ya.
Otu ugboro n'izu ịgbanwe muslin.
Site na ozi a ị nwere ike ịmụta iji psychrometer.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Netwọk Mgbasa Ozi » Meteorology » Ngwaọrụ gbasara ihu igwe » Psychrometer
Ezigbo edemede, ma e jiri ya tụnyere nke m chọtara, a haziri nke a nke ọma. Enwere m ajụjụ gbasara ọrụ m ga -arụ. Ọ dị m mkpa ịlele oke okpomọkụ nke bọlbụ mmiri mmiri nke igwe mmiri ọkụ nke oke okpomọkụ ya dị na 100-120ºC. Maka nke a, anọwo m na -achọ psychrometer nke na -eme ka oke okpomọkụ dị n'etiti ndị na -eweta ihe dị iche iche, mana ahụghị m ya. Ị maara nke ọ bụla? N'aka nke ọzọ, iji rụpụta ngwaọrụ ahụ n'onwe m, anọwo m na -achọ akwa dị iche iche nwere ike iguzogide ọnọdụ iru mmiri na oke okpomọkụ, ọ ga -ezuru ma ọ bụrụ na mmiri ịsa akwa ahụ dị jụụ?